Orinasa Cruise Ship any Seychelles no mandeha tsara
Home » Travel Associations News » Orinasa Cruise Ship any Seychelles no mandeha tsara
Desambra 3, 2017
Mandehandeha ny orinasan-tsambo Cruise Ship any Seychelles, toy ny any amin'ireo nosin'ny Ranomasimbe Indianina hafa. Ny ezaka hisarihana ireo orinasan-tsambo fitaterana an-tsambo sy hampiakarana ny faharetan'ny fijanonana ao amin'ny seranan-tsambonay dia ny antsoantso nataon'ny Organisation Vanilla Islands. Vao ny faran'ny herinandro lasa teo dia sambo roa no tao Port Victoria ary samy nifatotra alina tao amin'ny Port Victoria Quay. Ny fotoana izao dia hifindra mba hahatonga an'i Port Victoria ho sariaka kokoa amin'ireo mpandeha an-tsambo raha te-hanohy hankafy ny fitomboan'ny orinasan-tsambo fitaterana ankafizintsika ankehitriny.
Col. Andre Ciseau, tale jeneralin'ny Seychelles Ports Authority (SPA) dia nampiasa ny fivorian'ny Zambia Cruise Africa 2017 nataon'ny mpitarika ny indostria ao Port and Maritime Operations of Atsinanana sy atsimon'i Afrika (PMEASA) mba hanoratany ny fomba nifindran'ny SPA. Port Victoria mba handraisana tsara kokoa ny isan'ireo sambo fitsangantsanganana tonga any Seychelles. Ny vavahady lehiben'ny Port Victoria dia ara-barotra miaraka amina kamion-kaontenera sy fiara mpitondra entana mihetsika hatrany. Col Ciseau dia mikarakara lalantsara fidirana 'sariaka mpizahatany' kokoa ho an'ireo mpandeha amin'ny Cruise Ship izay hihoatra ny fidirana amin'ny entana, mba hiantohana ny 'Port Victoria' an'i Seychelles mijanona ao amin'ny lisitry ny Call Call for Cruise Ships. Natomboka ny asa fanadiovana ny lalantsara fidirana 'mpizahatany'.